We Fight We Win. -- " More than Media ": သတင်းဓါတ်ပုံရယူရန် ကြိုးစားရာမှ NLD ပါတီ ပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကို ခံခဲ့ရကြောင်း
သတင်းဓါတ်ပုံရယူရန် ကြိုးစားရာမှ NLD ပါတီ ပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကို ခံခဲ့ရကြောင်း
The Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။
မေလ ၈ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်
စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ( UMFCCI ) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် သတင်းရယူနေသော Express Times ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် သုံးဦးအနက် ကိုဟိန်းကိုစိုးမှာ သတင်းဓါတ်ပုံရယူရန် ကြိုးစားရာမှ NLD ပါတီ ပါတီဝင်တစ်ဦး၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကို ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ The Express Time ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် သုံးဦးကို The Messenger ဂျာနယ်က
တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ကိုဟိန်းကိုစိုး (သတင်းထောက်) The Express Times ဂျာနယ်
စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းနှစ်ပတ်လည် ပွဲမှာ NLD ပါတီနဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပုံလေး ပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော်က အန်တီစုနဲ့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ဦးမြတ်သူဝင်းတွဲနေတဲ့ ပုံကိုလိုချင်လို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့သွားတာ အဲဒါကို သူက ကင်မရာကိုင်တဲ့ လက် ကို ရိုက်ချတယ်။ ဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့လို့ မင်းကို ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီဓာတ်ပုံက အရေးကြီးတယ်။ အများပြည်သူသိချင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူကို ရှင်းပြပြီးပြန်ထွက် ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ သူက ကျွန်တော်နောက်ကို အတင်းလိုက် လာပြီး UMFCCI ထဲက အိမ်သာထဲကို ခေါ်ပြီး ကျွန်တော် ရင်ဘက်ကို ဆောင့်ဆောင့်တွန်းတယ်။ ပြီးတော့ မင်းက ဘာကောင်မို့လိုလဲ ငါတို့က နိုင်ငံရေးကို ထောင်ကျခံ ပြီးလုပ်လာတာ။ မင်းတို့ ဂျာနယ်လစ်တွေဆိုတာ ပိုက်ဆံရဖို့ လုပ်နေတာ မင်းအယ်ဒီတာချုပ်ကို ဒီအတိုင်းပြော လိုက်လို့ ပြောတယ်၊ ပြီးတော့ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်။
မီဒီယာအပေါ်အခုလို ပြောတဲ့ အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
NLD ဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ ပါတီဖြစ်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေးစားမှုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါတီထဲက လူတစ်ယောက်က မီဒီယာသမားတွေကို ဒီလိုဆက်ဆံ တာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ပါတီဝင်တစ်ယောက်က ဒီလိုပြော ကြားပေမယ့် NLD က ပြောတယ်လို့ မခံယူပါဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေ NLD ပါတီဝင်ထဲမှာ ရှိနေတာတော့ သေချာ စိစစ်ပေးဖို့ လိုတယ်။
မီဒီယာသမားအကုန်လုံးကို ပြောလိုက်တယ်လို့ အစ်ကို အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ယူဆတာလဲ။
သူပြောလိုက်တာကိုက ငါတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရဘဲ ထောင်ကျခံပြီး လုပ် နေတာ။ မင်းတို့ဂျာနယ်လစ်ဆိုတာက ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ လုပ်နေတာ ဒီစကားကို ပြောကတည်းက မီဒီယာအကုန် လုံးသိမ်းကြုံးပြီး ပြောတယ်လို့ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ကိုဟိန်းကိုစိုးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဆက်လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ကပါတီကို တရားဝင်စာပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်းနဲ့ မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက် (MJN) တို့ အပြင် ဂျာနယ်တိုက်အသီးသီးကို အကြောင်းကြားစာတွေ ပေးပို့ထားတယ်။
ကိုဟိန်းကိုစိုး အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းစေခြင်း သလဲ။
ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ကို တောင်း ပန်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာသမားတွေဆိုတာ သူပြောသလို ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် အလုပ်လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ဝါသနာကို အရင်း ခံပြီး အများပြည်သူတွေ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို စာမျက်နှာပေါ်က တဆင့် တင်ပြနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။
ကိုဇင်အောင်ထွန်း (သတင်းထောက်) The Express Times ဂျာနယ်
ကိုဇင်အောင်ထွန်း အနေနဲ့ ဒီလိုမီဒီယာသမားတွေကို ပြော ဆို ဆက်ဆံတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်သေးလဲ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအရင်ကထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြည်သူတွေ အမြင် မီဒီယာကပါ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြလို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာတာပါ။ ဒါကို သူက အကုန်လုံးကို ပုတ်ချပြီး သူတစ်ယောက်ထဲ လုပ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောတာ NLD ကို မဆိုလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပါတီထဲမှာ ဒီ လိုလူမျိုးရှိနေတာ မကောင်းဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးကို ကျွန် တော်အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးသင့်တယ် လို့ ထင်တယ်။
ဖြိုးဖြိုးဝေ (သတင်းထောက်) The Express Times ဂျာနယ်
အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြိုးဖြိုးဝေ အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်သလဲ။
သူက NLD ပါတီဝင်ဆိုပြီး မာန်တက်နေတယ်။ အားလုံးက လူတွေပဲ လူကို လူလို့ တန်ဖိုးထားပြီး ဆက် ဆံစေချင်တယ်။ အခုတော့က သူက ဆဲဆိုပြီး ကိုယ်ထိ လက်ရောက်ကျူးလွန်တာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒါကို သူတို့ ဘက်လူကြီးတွေ အနေနဲ့လည်း အဲဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ် အောင် လက်အောက်ငယ်သားတွေကို နည်းနည်းပါးပါး ပြေပြထားသင့်တယ်။ တခြားပါတီတွေမှာ ဒါမျိုးမတွေ့ ဖူးဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
Source:Nay myo lin FB မှ
NLD လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူက Weekly Express Times မှသတင်းထောက်အားကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျုးလွန်ခြင်းနှင့်မီဒီယာသမား
give them 1000 kyats each,like htet htet moe oo.
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ မီဒီယာသမားလုံးဝမှားပါတယ်။ တဘက်က မရိုက်စေချင်လို့ ပြောတာကို လေးစားလိုက်နာမှပေါ့။ မီဒီယာသမားဆိုပြီး ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးလေ။ မီဒီယာကြောင့် ကောင်းကျိုးရှိသလို မဖြစ်သင့်တဲ့ ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ (ဥပမာ-ဒိုင်ယာနာကိစ္စ)
အန်လယ်ဒီ မာန်တက်နေတယ်. ဒါတောင် လွှတ်တော်မှာ အမတ်နေရာ ဘာမှ မရှိသေးဘူး. သူတို.များတက်လာရင် ကြံ.ဖွံ.ထက်ပိုဆိုးမယ်. အခြေခံပညာလည်း မရှိ. သူတို.လုပ်တာပဲ အကောင်းထင်.စောက်ရှက်လည်းမရှိ. ခုတမျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး လင်ခိုးမျိုး.. အလကားထောင်ထွက်ပါတီ. ထွီ.....
BA BA Black Sheep, have you any more?
ကဲ ကဲ... တဖက်တည်းပြောတာ နားမယောင်ကြနဲ့ ၊ သက်သေ သတင်းထောက်ပြောတာလည်း ဖတ်ကြည့်ကြဦး
The express time ရဲ့စွတ်စွဲချက်တွေမှားတယ်မှန်တယ်သိချင်ရင် အဲဒီအချိန်မှာ
အတူရှိနေတဲ့ အခြား မီဒီယာ တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကို
The express times ကိုပြောချင်တာကတော့နာမယ်
The Express Time = Myanmar Express. Please go to http://www.myanmarexpress.net/ and you will know their real intention.